प्रचण्डको चुनाव खर्च ९ लाख ९४ हजार, चितवनमा अरूले कति–कति खर्चिए ? — Newskoseli
प्रचण्डको चुनाव खर्च ९ लाख ९४ हजार, चितवनमा अरूले कति–कति खर्चिए ?
रत्ननगर (चितवन), ३ माघ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका बेला चितवनमा ९ लाख ९४ हजार ५ सय ४२ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन् ।
पार्टीका सचिवालय सदस्य सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ मार्फत प्रचण्डले चुनावी खर्च विवरण पेस गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख हरि ढकालले जानकारी दिएका हुन् । अध्यक्ष दाहाल चितवन क्षेत्र नम्बर ३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का उपाध्यक्ष एवम् वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको चुनावी खर्च ९ लाख ३९ हजार ९ सय ४० रूपैयाँ पेस भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्रमा कूल ९५ जनाको उम्मेदवारी परेकामा अहिलेसम्म ६७ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेको जानकारी ढकालले दिए ।
खर्च विवरण पेस नगर्नेमा साना दलका उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले बढीमा २५ लाख रूपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले १५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने नियम छ ।
चितवन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले १३ लाख ५७ हजार ६ सय ७३ रूपैयाँ खर्च भएको भन्दै विवरण पेस गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस नेता राजेन्द्र बुर्लाकोटीको चुनावी खर्च १६ लाख २९ हजार १ सय ७० रूपैयाँ छ ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोख्रेलको चुनावी खर्च १४ लाख ३९ हजार ८ सय रूपैयाँ छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शिक्षा राज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शेषनाथ अधिकारीले १३ लाख ९३ हजार रूपैयाँको विवरण बुझाएकाे कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यस्ता पनि अस्पताल : हृदयाघातको बिरामीलाई ग्यास्ट्रिकको औषधि !
प्रवक्ता नारायणकाजीको राजीनामा अस्वीकृत : के–के निर्णय गर्‍यो नेकपा सचिवालय बैठकले ?
सरकारलाई निधिको सुझाव : दुईतिहाइ निरर्थक हुन नदिन गम्भीर बनोस् !
रामवीरको राजीनामा फिर्ता : टुंगियो उपनिर्वाचनको बहस
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक : मन्त्रीहरूको फेरबदलबारे छलफल